Ukucwangciswa kwegadi kufuneka kwenziwe ngononophelo olukhulu. Nangona kunjalo, nokuba umsebenzisi akanayo igadi enkulu anayo, kodwa ngumyezo omncinci kuphela, okanye i-balcony okanye ithala, inokudala nesiqwenga sendawo eluhlaza. Isiseko sayo iya kuba iimbiza zegadiukhetho lwayo lukhulu.
Zeziphi izimbiza zegadi azikhetha, kuthathelwa ingqalelo izinto zabo okanye ubungakanani?
Bona kwakhona: Uyilo lweedolophu ezincinci
Iindidi zeembiza zegadi
Iimbiza zegadi ziyafumaneka kuluhlu olubanzi kakhulu lokukhetha. Bahlukile ngobume, ubungakanani kunye nezinto, ke zonke zixhomekeke kumbono wolungiselelo lwendawo. Ukuba iimbiza zahlulekile ngokwezinto zazo, oku kulandelayo kuthathelwa ingqalelo:
Iimbiza zomthi ezenziwe ngomthi
Iimbiza zomthi ezenziwe ngomthi -Njengoko kwaziwa kakuhle, iinkuni zizinto zendalo, sibonga ngeziphatho zegadi ezenziwe ngomthi eziya kulunga nasiphi na isitiya okanye ithadi ngaphandle kokungafani. Emva kwayo yonke loo nto, kukwenziwa kwesitayile esinomdla kunye nokusebenza kwezinto ngeendlela ezahlukeneyo. Ke ngoko, iiphothi zegadi zokhuni ziya kuzalisa ngokugqibeleleyo indawo ngeebhentshi zokhuni, i-rattan okanye iiteknoloji- kunye neetayitile, kunye nokulingene kwindawo engezantsi yeklasi.
Iimbiza zegadi ekhonkrithi
Iimbiza zegadi ekhonkrithi Iimbiza zekhonkrithi egadini zihlala zisetyenziswa kwiindawo zikawonkewonke. Nangona kunjalo, banokubekwa kwiigadi zasekhaya, iibhalkhoni okanye kwiitreythi. Ngokubalulekileyo, ukusuka kwindawo yokujonga ukusetyenziswa, iimbiza zekhonkrithi zekhonkrithi zinzima, kwaye ke kwelinye icala lixhathisa i-gust yomoya, kwaye kwelinye icala kunzima ukuhamba. Ukuba ezi zizithuba ezincinci, banokuwoyisa ngenkangeleko yabo. Emva koko kufanelekile ukutyala kwiimbiza zekhonkrithi yegadi ezinemilo elungelelanisiweyo, okanye iimbiza kuphela zilingisa ikhonkrithi.
Iimbiza zeplastiki zegadi
Iimbiza zeplastiki zegadi -olu hlobo lweembiza lubonakaliswa ikakhulu ngexabiso eliphantsi. Ukongeza, kuluhlu olukhulu lweemveliso (kubandakanywa neembiza ezinkulu zencinci zeplastiki yegadi, iipakethe zangaphantsi neziphezulu zegadi, izimbiza zangoku kunye nezodidi lwasadini Amaxesha amaninzi akhanya lula kwaye ke kulula ukuthwala. Kwelinye icala, bangqongqozwa lula yimimoya yomoya, ngoko ke - ngakumbi iimbiza ezinkulu zeplasitiki- kufanelekile ukongeza ubunzima. Umngxunya emazantsi embiza yeplastiki nawo uya kuba luncedo, oya kuqinisekisa ukuhanjiswa kwesityalo esifanelekileyo esityalwe kuyo.
Iimbiza zeglasi zeCeramic
Iimbiza zeglasi zeCeramic -ngokungathandabuzekiyo, iizaha zegadi zegadi (ezinkulu nezincinci) zezinye zeembiza ezisetyenziswa kakhulu, kuba ziluhlobo olunomdla wolungiselelo. Kulula ukuhamba kwaye ukongeza bayamelana nemozulu yezulu. Okubaluleke ngakumbi, malunga nokhathalelo lwezityalo, ziqinisekisa ukujikeleza komoya okufanelekileyo. Ngelishwa, izimbiza zegadi ye-ceramic azihlali ixesha elide kwaye kulula ukuziqhekeza, umzekelo xa usiya okanye uthwele.
Iimbiza zegadi zamatye
Iimbiza zegadi zamatye -Imigangatho ebukekayo kakhulu kwaye ikhethekile, kodwa neembiza ezibiza kakhulu egadini, zihlala zisetyenziswa kwiindawo zikawonke-wonke (umz. emangcwabeni). Izixhobo zeembiza zamatye zinokuba zizigogo okanye imarble.
Iimbiza zegadi yensimbi
Iimbiza zegadi yensimbi Iimbiza zesinyithi zihlala zizezona zincinci iimveliso ezincinci, zihlala zisebenzisa ialuminium okanye intsimbi yegalvanized, ebakhusela ekubumbeni. Ukongeza, ziimbiza zomthi ezinokumelana neqabaka ezinokushiywa ngaphandle unyaka wonke. Kufuneka baphathwe njengezimbiza zanamhlanje zegadi.
Iimbiza zeRattan okanye zerattan
Iimbiza zeRattan okanye zerattan -izitya zeentyatyambo ezihle kakhulu zegadi yokuhombisa, iibhalkhoni, iigadi kunye neegazebis kwisitayile sanamhlanje. Banikezela ukhetho olubanzi ngokwemeko yobukhulu kunye nobungakanani, obunokusebenza njengesiciko sebhedi efanelekileyo yezinto ezahlukeneyo. Umahluko phakathi kwe-rattan kunye ne-polytantan, phakathi kwezinye izinto, ukuxhathisa umswakama kunye nemitha yelanga. Ngokuqinisekileyo, i-polytan rattan ibukeka ibhetele kule nto.
Okanye ngaba unokuhombisa iimbiza zedolophu?
Ukukhethwa kweembiza zegadi kukhulu, ngakumbi kuba kwezinye iigadi unokubheja ngazo yoqobo, lolunye uhlobo iimbiza zedolophu. Kule meko, ezi zihlala zikhulu okanye ubuncinci zizimbiza eziphakathi, ke ziya kusebenza kakuhle kwizikhala ezikhulu, nangona kungengomgaqo. Izitya zeentyatyambo zesixeko ezikhethwe ngokufanelekileyo ziya kuyenza intle igadi kwaye yongeze umbala kuyo.
Njengomthetho, yimo yendabuko, kunye neendlela ezincinci, ngenxa yoku kulungeleka ngokufanelekileyo kulungelelwaniso lwegadi, ngakumbi kwisitayile sanamhlanje. Ngaphezu koko, kwelinye icala, ziimbiza zokuhombisa, kwelinye icala zisebenza ngemisebenzi eyongezelelweyo:
Iimbiza zeentyatyambo ezibengezelayo.
Ngale ndlela, badibanisa i-aesthetics kunye nomsebenzi osebenzayo. Imbiza iya kusebenza njengendawo yeentyatyambo, amatyholo okanye imithi emincinci, kunye netafile, isihlalo, okanye emva kokuhlwa iya kuphawula iindlela zonxibelelwano egadini.
Bona kwakhona: Imigqomo yenkunkuma yesitrato yanamhlanje njengenxalenye yoyilo lwasedolophini
Zeziphi iizajana zegadi oza kuzikhetha?
Kuyabonakala ngokucacileyo ukuba kukho ukhetho olukhulu kakhulu lweembiza zegadi kwimarike, ngoko ke wonke umntu kufanele afumane into elungele nje igadi yabo, i-balcony okanye ithala. Konke kuxhomekeke kulungiselelo lwendawo, umzekelo kwisitayile sesiko, sale mihla okanye ye-avant-garde. Abanye baya kukhetha iiplate zokhuni, abanye baya kukhetha iimbiza zensimbi okanye zamatye. Iimbiza ezincinci ziyacetyiswa kwi-balcony, kodwa iimbiza ezinkulu zegadi ziya kulungela itreyiti enkulu. Qaphela kwakhona loo nto Iimbiza nganye zinokuhonjiswa ngokukhululekileyo, umzekelo, ngezona zinto ziqhelekileyo zenziwa ngesandla, iisheyithi, zapeyintwa.
Kwabaninzi, ixabiso ngokuqinisekileyo likwisikhombisi zokhetho. Oku akuthethi, nangona kunjalo, ukuba kuya kufuneka ubheja kwiimbiza zegadi ezingabizi. Thengisa (umz Uyilo lweFomu yeSixeko) lithuba elifanelekileyo lokuthenga iimbiza ezilungileyo ezenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu ngexabiso elinomtsalane. Ungagcina okuninzi ngale ndlela, ngokuthenga ngexabiso eliphantsi iimbiza zegadi yenziwe ngekhonkrithi, kunye neembiza zamatye ezikhethekileyo.
Omnye umqobo wokukhetha zizityalo umsebenzisi afuna ukuzityala kwindawo eluhlaza yegadi yakhe, ithala okanye ibala. Ayisoloko ihlala ikhona kwiimbiza ezinkulu zegadi. Ncinci, Iimbiza ezixhonyi ziya kusebenza kakuhle kunye nezityalo ezikhwele kunye nee-rhizomes. Kwimikhulu nditsho nemithi emide kunye nemithi emidenakwiimbiza ezinobunzima bazo zonke iintlobo Amakhambi.
Bona kwakhona: Iipali zocingo
5 / 5 ( 17 iivoti )
iimbiza zekhonkrithi egadiniiimbiza zekhonkrithi egadiniiimbiza zomyezo wamaplangaiimbiza zedolophuumenzi weembiza zedolophuiimbiza zegadiiimbiza zekhonkrithi egadiniiimbiza zegadi yeceramiciimbiza ezinkulu zeceramic yegadiiimbiza zomyezo wamaplangaiimbiza ezinkulu zegadiiimbiza zesitiya zamatyeIimbiza zegadi yensimbiIimbiza egadiweyo ezinqanda iqabakaiimbiza zanamhlanje zegadiiimbiza zeplastiki zegadiiimbiza ezinkulu zeplastiki yegadiukuthengiswa kweembiza zegadiiimbiza zekhonkrithi egadiniIimbiza zeRattanIimbiza zeTekhorattaniimbiza zomyezo wamaplangaiimbiza ezinkulu zegadiIimbiza zeentyatyambo ezikhethekileyoiimbiza zanamhlanje zegadiiimbiza ezinde zegadi